NgoJuni 19-21, 2019, i-Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd. yabamba iqhaza kwi-International Trade Week eGhana.
NgoJuni 19-21, 2019, i-Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd. yabamba iqhaza kwi-International Trade Week eGhana. Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle embukisweni futhi yabikwa ngabezindaba abakhulu bendawo. UHenry, umphathi wethu woMnyango we-Oversea, njengommeleli wezinkampani zokubukisa, wabelane ngesingeniso esinemininingwane ethe xaxa mayelana namathayela ophahla lwamatshe ethu avela ezintweni eziyisisekelo zokusetshenziswa komkhiqizo osezingeni eliphezulu waphinde waveza amaphrojekthi amahle esiwenzile.
IGhana, njengemakethe entsha entshonalanga ne-Afrika, amakhasimende kanye nabathengi babenezinketho ezimbalwa zokukhetha ophahleni lwabo. Amathayela ophahla lwamatshe ethu aboniswa ngokusobala emehlweni abo bonke abavakashi, ikakhulukazi labo abangenisa izinto zokwakha nabasebenza kosonkontileka. Inani elikhulu lezivakashi lakhombisa intshisekelo enkulu ngomkhiqizo wethu.
Sijabulise amakhulukhulu abavakashi ebhukwini lethu, sichaze kahle yonke inhlobo yemibuzo ngamathayela wethu ophahleni kanye nogesi wePVC ukubasiza ukuba basazi futhi bawazi kangcono umkhiqizo wethu. Amakhasimende amaningi nabasebenzisi bokugcina bashintshana amakhadi webhizinisi nathi noma amasampula aqoqiwe, amashadi wemibala nezincwajana ezivela kithi, ngisho nangokwengeziwe, abanye babo bafaka imali ethile ukubeka ama-oda ngokushesha. Lo mbukiso uthole impumelelo ephelele kanye nembuyiselo emihle impela. Sikholwa ukuthi sizoletha izakhiwo ezintsha futhi ezinhle emiphakathini yaseGhana.
Isikhathi sokuthumela: Apr-08-2020